Ngokuphindaphindiweyo, ukuya kwi-pharmacy kwenye iyeza, sikhohlwa ukuba kwimvelo imithombo engapheliyo ibekwe kwimpilo yethu. Ukujonga kwisifuba somdala, unokufumana amanqaku amaninzi okulungiselela ukulungiselela izicwangciso zokuphucula impilo kunye nokugcina ubuhle. Esinye salezi zipho zendalo i-flax. Sijwayele ukushicilela iingubo zelinen, iitrafethi, iimpahla zelinen ephezulu, kodwa asicingi ngeempawu zokuphilisa zesi sityalo. Imbali yefleksi igxininiswe kwiMandulo yaseRussia, xa yayiyinto ebonakalayo ebalulekileyo yokwenza ilinen, imbewu yayo yayisetyenziselwa ukutya. Ngoku kukho iintlobo ezingama-200 zefleksi. I-Flax yinkcubeko yonyaka yokupaka kunye neoli. I-oyileji kunye nefowuni yeflaksi zizinto ezibalulekileyo ezibalulekileyo ezisekelwe kwiziveliso ezininzi zokwelapha kunye nezokucoca. Kule nqaku, siza kuthetha ngeempawu zonyango zefowuni.
Yenziwe kwimbewu yefelk, enokupheka ngisho nasekhaya ngokugaya kwi-grinder.
Uluhlu lweflaksi lucebile ngesinyithi, i-zinc, i-calcium, ithusi, i-phosphorus, i-molybdenum, i-manganese, i-sodium kunye namavithamini B, A, E. Iqukethe amaprotheni, i-polyunsaturated acids, ngakumbi i-Omega-3 ne-Omega-6. Inzuzo ekhethekileyo yefowuni yefelk yimifuno ye-antioxidants i-lignans, ekhuphisana ngokukhuphisana nama-hormone akhuthaza ukubunjwa kweeseli zomhlaza.
Umgubo weFlakisi ululaliswa lula ngumzimba womntu. Ubutyebi obunjalo beivithamini kunye neemaminerali eziqulethwe ngepuphu yefelk, zinikezela ngokubanzi kwi-pharmacology, ukupheka kokutya, imboni yokucoca. Into ebalulekileyo yinto yokulula yokulula.
Ukusebenza ngokupheleleyo kwendlela yokuxhamla kwamathumbu akukho nto engcono kunokuba ugugu lwefleksi. Uluhle kakhulu "ucocekileyo" kumzimba womntu. Ukwamkela rhoqo umgubo onjalo kukunceda ukulahla i-slags kwiindawo ezingenakufikeleleka - akukho-laxative ayikwazi ukuthelekiswa ngokwemiqathango yokuvelisa nokucoca komgubo wefelek. Utshaba inamba ye-1 kuzo zonke iintlobo ze-parasites kunye neep lipids.
Ukucoca umzimba, umgubo wefelek ungasetyenziswa ngolu hlobo lulandelayo: thatha i-100-200 gram ye-kefir okanye i-yogurt, xuba kunye nama-gram angu-20 wefeleksi. Thatha ekuseni, endaweni yokutya kwasekuseni, kwiintsuku ezingama-20 ukuya ku-30. Ngethuba lemini, siphuze ukuya kuma-3 ilitha amanzi ukuze ususwe ngexesha elifanelekileyo. Kuyinto enqwenelekayo ukufeza inkqubo encinane kabini ngonyaka.
Ukuba ufuna ukuvalelwa ngokungahambi kakuhle iipilisi ezimbalwa , awunakufumana umkhiqizo olungcono kunokuba ugugu lweflaksi. Kuyafaneleka naluphi na ukutya: umgubo wongezwa kwiisobho, izitya zangasese, zifafazwe ngamasaladi, iipanie cutlets, i-chops, iimveliso ezahlukahlukeneyo ezigqityiweyo. Ukulahla ubunzima obukhulu, ufuna i-0, 5 iziglasi zamanzi (30-40º), 1 ithisipuni yomgubo weflekisi. Gcwalisa umgubo ngamanzi, sinyanzelise iyure kwaye songeze esinye iilazi ze-0, 5 zeamanzi afudumele. I-Tincture siyaphuza endaweni yokutya. Ngenyanga ulahlekelwa kwi-4 kg yesisindo.
Ukuphulukisa iimpahla zomgubo kubaluleke kakhulu kubantu abanesifo sikashukela, i-atherosclerosis, ukukhuluphala. Njengomlinganiselo wokuthintela, ufulawa lwefelk isetyenziselwa izifo ze-cardiovascular and ofcological, izifo zokuphefumula kunye nezifo ezinobomi. Iingcali zenzululwazi zaseMerika ngokugqibeleleyo ziphelile ukuba ukuba yonke imihla idle i-30 g yaloo mgubo, ngoko inkqubo yokuphuhlisa umhlaza wesibeletho esele ikhona kumadoda incitshiswa ngama-30-40%.
Ukuba ufuna ukubukeka umncinci, ukhangeleka, ukhangeka, bhekisa kwimbewu yeflekisi. Iimaski kunye neenkomfa ezisekelwe kwifowuni yefelk ziza kunika isikhumba sakho, siqiniseke, siphucule ukujikeleza kwegazi, sihlambulule i-pores, sinokuphulukisa emzimbeni.
Iyeza lonyango linika inani elikhulu leemaski ezivela kumgubo. Isiseko semaski ngumgubo weflaksi, oxutywe kunye nemifuno okanye ibhotela, ukhilimu omuncu, ekwakheni i-gruel eninzi. Njengezinto ezongezelelweyo, amaqanda, ubusi, udongwe olumhlophe, ijusi lemon. Ukwenza imaski eshushu, kufuneka ugaye ezintathu zezipuni zefleksti zibe ngumgubo uze uthule iglasi yamanzi abilisiwe. Xa iziqulatho zikhula, kufuneka ungeze ii-2 tsp. ioli neoli ½ tsp. nobusi. Ezi maski zisetyenziselwa ngokukhawuleza emva kokupheka, ukubeka ubuso kunye nentamo, emva kwesigama seyure zihlanjwe ngamanzi afudumele, ngoko ulusu lucoca ngekhilimu.
Imaski esekelwe kulo mgubo ingasetyenziselwa iinwele. Akunakongeza kuphela ubuqaqawuli kunye nomthamo, kodwa kwakhona kunceda ukukrazula i-dandruff kunye nezinye iingxaki. Iyeza zonyango zicebisa loo maski ekukhuleni kwesikhumba. Uze undikholelwe-umphumo uyamangalisa.
Ifrikhi yeflaksi yinto ekhethekileyo engabangela iziphumo ezizeleyo kubantwana okanye kubantu abadala. Incedo kubini abantu abagulayo kunye nabaphilileyo. Yaye ukuba uthetha umgubo wefleksi ekudleni kwakho, kuya kwandisa kuphela kwimpilo yakho, ubuhle kunye nomoya ontle.
Njani kwaye kutheni ukuzila?
Ikhumba elimsulwa ngaphandle kwe-acne
Unyango lwe-cat scratch disease kunye nezilwanyana zomntu
Iimfihlelo zempilo enhle kunye nokuphila ixesha elide
Izakhiwo zonyango lwe-buckthorn yolwandle
Izinzuzo zesonka se rye
I-Hollywood Diet: Ukulahleka kwesisindo
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-peridot
Indlela yokwenza umtshato ungalibaleki
Indlela yokukhulisa i-raspberry kwintsimi?
Isaladi eluhlaza kwibhasikidi epholileyo
Ukucoca ngokugcwalisa isardadi ecocekileyo
Indlela yokukhetha ikrini elingaphakathi kwekhitshi
Kutheni iincwaba ezizolile kunye negrey zikhululekile ngakumbi ngobomi babo?
Indlela yokuhlambulula ibhatyi ekhaya
Ziziphi iimveliso ezinoncedo kakhulu?
Ukutya ukutya kunye nenkukhu
Iintyatyambo ezifakwe kwi-zucchini
Isalathisi esipheleleyo sehlobo
Uhlalutya ngokusekwa kobunikazi
Izityalo zangaphakathi: uMandevilla
I-Stylish - ayithethi ukukhanya: Iqoqo leKrisimesi